Izindaba - Indonesia International Packing Exhibition
Isikhwama seplastiki sokupakisha
isikhwama sokupakisha imaski
Isikhwama sekholomu lomoya
Isikhwama sokupakisha sephepha
Indonesia International Ukupakisha Isentha
Zonke izenzo zeHongbang zigcwele isivuno. Embukisweni wamazwe omhlaba e-Indonesia, uHongbang waphinde waphuma. Kwakuyimpumelelo ephelele futhi kwaxoxwa nabo ohlelweni lwe-TV lwendawo. Kulo mbukiso, sibuye sibonise umoya weHongbang - ubunye, okuhle, umzabalazo onzima. Njalo ekuxhumaneni namakhasimende kungabonwa ngamakhasimende. Njalo ohambweni lubonisa isitayela se-hongbang.
Leli yiqembu lethu elihle, elihloniphekile nelisebenza kanzima.
Okokuqala, qinisa emibonweni nasezinkolelweni zakho. Ukukholwa kungamandla aqhubayo ayo yonke imisebenzi, kuyinkomba, kuyisibani. Kungaleso sikhathi kuphela lapho sinokuqondiswa okucacile lapho singasebenza kahle.
Okwesibili, kufanele sifunde kanzima futhi sithuthukise ikhwalithi yethu njalo. Kufanele sihlomise izingqondo zethu ngemibono yesayensi, siqonde kahle ukuthambekela kwentuthuko yezenhlalakahle, sakhe umbono olungile wezwe, umbono ngempilo namagugu, futhi sakhe umkhuba wokufunda impilo yonke. Kufanele sihlale sakha imibono emisha, sifunde ulwazi olusha futhi siqonde amakhono amasha, ukuze sinikele ngokuhlakanipha kwethu nokuhlakanipha ekuthuthukiseni nasekukhuleni kweHongbang.
Okwesithathu, njengelungu Hongbang emaphaketheni, kufanele siqhubekele phambili futhi sibe nesibindi ukusungula. Ngaso sonke isikhathi lapho i-hongbang isungula izinto ezintsha, kufanele ihambisane nemibono yomsebenzi wokuphayona neyokuqamba, ihlanganise eduze izidingo zabaphathi kanye nezimpawu zeThe Times neqiniso, futhi yenze umsebenzi ngobuciko. Kumele sigcwele amandla nobungqabavu. Njengamandla amasha nama-commandos aseHongbang, kufanele sisebenze ngentshiseko futhi siphile ngokujabula.
Maqabane, masisebenzisane, sithulule imbali yomqondo omuhle ngomjuluko, sifake uthingo lwendawo enhle ngezandla zombili, siqoqe amandla abo bonke abantu, sihlangane sibe munye, sisebenze kanzima, futhi sibhale isahluko esihle kakhulu emlandweni omkhulu we Impumelelo kaHongbang entuthukweni!
Isikhathi Iposi: Nov-06-2020
Ikheli: Igumbi 607, isakhiwo C, xiangzhigu, 58 NANLIAN Road, Longgang District, Shenzhen City, Isifundazwe saseGuangdong
Ucingo: 0755 2898 8518
Ithemba lokuthuthuka lesikhwama sephepha se-kraft
Buka Okuningi +
Ukuphrinta kwe-Hong Kong International and Pack ...
© Copyright - 2021-2023: Wonke Amalungelo Agodliwe.